न्यूज सञ्जाल: » कुलमान नै किन चाहन्छन् आम मानिस ?
न्यूज सञ्जाल १३ भाद्र २०७७, शनिबार ०९:०३
काठमाडौं । आम जनता कुलमान घिसिङप्रति कति आशक्त छन् भन्ने उदाहरण एकाएक दोस्रो कार्यकालमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रसंगलाई लिएर भाइरल भएको बधाईबाट पुष्टि हुन्छ ।
मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई बधाईको ओइरो आयो तर कुलमानको पुनर्नियूक्तिको प्रसंगनै झुट थियो ।
कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले पनि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै बधाइ दिन भ्याए । यता डा राम उप्रेतीले पनि राम्रो काम गर्दा जनताले माया गर्छन् भन्दै घिसिङलाई बधाई दिए ।
सामाजिक सञ्जालमै प्रकाश बस्नेतले पनि कुलमानलाई अल्छी भन्दै ४ बर्षमा एक दिन पनि बत्ति काट्न जागर नगरेको भनेर लेखे । फेरि पनि यस्तै अल्छी गर्नु भन्दै उनले बधाई दिए ।
यी त सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कतिपयले गलत समाचार नै भए पनि सबैले बधाइ दिएपछि सरकारलाई एक प्रकारको दबाब महसुस हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । केही व्यक्तिले त फोटोको फ्रेम नै बनाएर कुलमानको फोटो सहित तिमी छौ र त देश उज्यालो छ भन्दै प्रोफाइल बनाइरहेका छन् । कुलमान प्रतिको आममानिसको आशक्त सामाजिक सञ्जालमा अहिले छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।
कुलमान कसरी आम मानिसको मन मतिष्कमा बस्न सफल भए ? चर्चा यसैबाट गरौं…
अबको १६ दिनपछि (भाद्र २९) घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ । उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अधिकांश उनको पुरागमन हुनुपर्ने माग गर्छन् । तर, केही जमात उनी आफै लोकप्रिय भएकाले उनले अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अवसर पाउनेछन् । यसैमा मरिमेट्नु पर्ने कारण नरहेको बताउँछन् । तर लोडसेडिङको प्रत्यक्ष मार खेपेका आम मानिस त्यही लोडसेडिङदेखि त्रसित छन् ‘कतै कुलमान बाहिरिएपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएर फेरि सास्ती पाउनुपर्ने त होइन ?’
कुनै सयम यस्तो पनि थियो हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुन्थ्यो, त्यो पनि १८-१८ घण्टा । साँझ पर्यो कि सर्वसाधारण वैकल्पिक उज्यालोको जोहो गर्न हतारिन्थे । लोडसेडिङकै कारण विद्यार्थीले रातको समयमा पढ्न पाउँदैनथे भने उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँदैनथे ।
जतिबेला बत्ति आउनेभन्दा जाने समय धेरै थियो अर्थात लोडसेडिङले अन्धकार बनेको थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई कुलमानको आगमनपछि लोडसेडिङ हुने समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ ।
अध्याँरो नेपाललाई उज्यालो छरेर हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका हेर्न पर्ने अवस्थाबाट आम सर्वसाधारणले मुक्ति पाए । घिसिङको फेक ट्वीटर अकाउन्टमा मंगलबार पुनःनियुक्तिको विषय आएपछि समाचार भाइरल बनेको थियो ।
सातौं तहको इन्जिनियरबाट (२०५१ सालमा) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी नियुक्त भएको २ महिनापछि कात्तिकको लक्ष्मीपुजाको दिनदेखि काठमाडौ उपत्यकाबासीले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन । अरुले लक्ष्मी पुजा मनाइरहँदा उनी स्युचाटारको भारप्रेषण केन्द्र पुगे र लोडसेडिङ हुन नदिन अनवरत खटिरहे । ३१५ मेगावाट सम्मको माग धान्न सफल भए ।
कुलमानले सबैभन्दा पहिला उत्पादन भएको एक चौथाइ विद्युत चुहावट हुने गरेकोमा पहिलो वर्षमा तीन प्रतिशतले घटाए । यसले नै उनलाई उज्यालोको यात्रामा अनवरत साथ दिइरह्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा केन्द्रिय विद्युत प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो ।
घिसिङको कार्यकालको पहिलो वर्षमा तीन प्रतिशत विद्युत चुहावट घट्यो । अहिले २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा विद्युत चुहावट १५.१७ प्रतिशतमा सीमित छ । १ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणलाई ७० करोडभन्दा बढी फाइदा हुनेछ । सधैँ घाटामा जाने प्राधिकरणले गत आवमा ११ अर्ब नाफा कमाएको छ ।
तर, यता केही विद्युतका क्षेत्रमै काम गर्नेहरु भने विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको महसुल बृद्धि गरिदिएका कारण प्राधिकरण नाफामा गएको बताउँछन् । हुन त प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी कोही छैनन् । त्यसैले उसले नाफा गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि कुलमानको व्यवस्थापकिय क्षमताका कारण उनको आगमनदेखि नै प्राधिकरण नाफामा गएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले २०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत ग्राहकले प्रयोग गर्ने विद्युत र २०७३ साउनमा सबै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतको शुल्कमा समायोजन गरेको थियो । उनी आउनु ठिक अगाडि समायोजन गरेकाले पनि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सहज भएको केही जानकारहरु बताउँछन् ।
यता केही विद्युत उत्पादकहरु भने प्राधिकरणले उत्पादकसँग सस्तोमा किनेर आफुले महंगोमा बेचेपछि नाफा गरेको आरोप लगाउँछन् ।
तर, अब आम नेपाली जनता फेरि देश लोडसेडिङ भएको हेर्न चाहाँदैनन । कुलमान बाहिरिए कहाँ जालान् र उनका ठाउँमा कस्ता व्यक्ति आउलान् भन्ने चासो र चिन्ता दुबै छ । उज्यालो बनाउने कुलमान निरन्तरताको आवाज धेरै उठेको छ । उनको निरन्तरता वा बर्हिगमन के हुन्छ आगामी निकट दिनमै थाहा होला । रातोपाटीबाट